Vaovao - Ahoana ny fampiasana hety hatsaran-tarehy biby
Ahoana ny fampiasana hety hatsaran-tarehy biby
Ankehitriny ny olona amin'ny fiainana dia tia mitazona biby fiompy. Raha alika io dia mila manamboatra volon'ilay biby isika. Ny hety biby fiompy dia nanjary fitaovana ilaina tokoa. Ity manaraka ity dia mamaritra ny fampiasana hety hely sy marika.
Fitaovana / akora fototra
Hety ho an'ny nify
1.Misy karazana hety biby fiompy, ao koa ny hety fito santimetatra ary hety valo santimetatra. Amin'ny ankapobeny, ny hety fito santimetatra sy valo santimetatra no ampiasaina hanamboarana ny vatana iray manontolo, ary ny hety dimy santimetatra kosa ampiasaina hanamboarana ny faladian'ny tongotra.
2.Raha mampiasa hety isika dia tokony hitandrina mba hihazona ny hety, ary rehefa mampiasa hety dia tsy tokony hampiasa hety hanamboarana zavatra hafa ankoatry ny volo. Raha tehety ny volo maloto dia hataony manjavozavo ihany koa ilay hety. Tokony handinika ianao.
3.Aza apetraka eo ambonin'ny latabatra hatsaran-tarehy ny hety biby fiompy. Hatao hisorohana ny fianjerana sy ny fikapohana izany. Amin'ny fampiasana ny fotoana aorian'izay koa mba hisorohana ny harafesina. Mamindra ny hety aorian'ny fiasana. Raha tsy maninona dia azo menaka ihany koa ho fikojakojana.
4.Raha ampiasaina dia tokony hohitatra ho rantsantanana iray ny rantsan-tànana, ary hapetraka ao aorian'ny axe afovoany ny rantsantanana. Rehefa mitazona dia tandremo sao mihazona be loatra. Atsipazo hiala amin'ny peratra ny rantsan-tananao. Ny tsara indrindra dia ny tsy mikasika ny rantsan-tànanao. Avy eo dia tazomy amin'ny sisiny hafa ilay ankihiben-tànanao. Tandremo ny fanetezana haingana rehefa manety. Satria mora mihetsika ny biby fiompy, noho izany dia mila mitandrina isika mba tsy handratra azy ireo rehefa manety.
Raharaha mila fiheverana
Fizarana hety (Product Series) maranitra sisiny hety dia fitaovana hatsarana matihanina avo lenta natao ho an'ny matihanina, miaraka amina endrika tsotra sy mamiratra ary tsipika tsara tarehy. Miaraka amin'ny fahombiazana sy kalitao tena tsara, ny vy 440C avo lenta dia ampiasaina ho akora fototra, miaraka amin'ny fanoherana ny harafesina matanjaka, manampy fitaovana vita amin'ny alikaola hampitomboana ny finiavana sy ny tanjaky ny hety, izay afaka manatratra ny hamafin'ny fanaintainana sy ny fanoherana. Teknolojia voadinika tsara, ny zoro fanapahana tsara indrindra, maranitra ary mateza, tsy mihazakazaka volo, solontenan'ny hety matihanina, mariky ny hatsaran-tarehy, mankasitraka hety maranitra ny biby fiompy, mendrika ny manana hety ny mpivady.
Rehefa misafidy hety biby fiompy, dia tokony hifantoka amin'ny safidy mifanaraka amin'ny filàna isika. Amin'ny ankapobeny, hety lehibe no ampiasaina hanamboarana ny volo amin'ny vatana iray manontolo. Raha toa ka somary kely ny habeny, dia azontsika ampiasaina izy ireo mba hanaingoana ny hoho biby fiompy. Amin'ny ankapobeny, raha hety hatsaran-tarehy tsara izy io dia tokony hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny tanana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy tokony hisy zoro maranitra ny lelany, ary tokony ho maranitra rehefa ampiasaina.